Hex Commander: Fantasy Heroes 4.4.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.4.1 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Hex Commander: Fantasy Heroes
Hex Commander: Fantasy Heroes ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
hex တပ်မှူး: Fantasy သူရဲကောင်းများညာဘက်လူသားတွေဟာအကြားစစ်ပွဲအလယ်၌သငျသညျထားပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအလှည့်-based မဟာဗျူဟာဂိမ်း Orcs, မှင်စာ, Elves, Dwarves နှင့်မှာတော့ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အားကြီးသောတပ်မတော် Build နှင့်သင့်သူရဲကောင်းများနှင့်ယူနစ်၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်များကို အသုံးပြု. အောင်ပွဲသို့သင့်ရဲ့တပ်တွေဦးဆောင်လမ်းပြ။ သင့်ရဲ့စာရင်းဇယားမြှင့်တင်ရန်နှင့် Single-player ကို, တိုက်ပွဲမှာနှင့် multiplayer PvP Modes သာ၌သင်တို့၏ရန်သူများကို outwit မှမြေပြင်အနေအထားအဖုံးများနှင့်အဆောက်အဦးများ၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ပါ။
လေးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူထူးခြားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်နှင့်အတူသူရဲကောင်းများထိန်းချုပ်ဖို့, ကိုယ်တော်၏လူကာကွယ်ရန်နှင့်အစွမ်းထက်ရန်သူများကိုကြုံတွေ့ရ။ ကဲ့သို့သောစစ်ဌာနချုပ်ယူနစ်; ခြေလျင်, Cavalry, မာဂုပညာရှိ, အစွမ်းထက်ဝိုင်းထားခြင်းစက်တွေ, Elven လေးသမား, Dwarven riflemen နှင့်အများကြီးပို။
လူ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး၌သငျ Percival Kent, လူ့အခြေချအတွက်မှင်စာလှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဧကရာဇ်ကစေလွှတ်ထားပြီးသူအတွေ့အကြုံရ Paladin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုယူဆ။ နိုငျငံတျောသညျကထွက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့လိုလားသူကားအဘယ်သူစစ်ပွဲချောက်ကမ်းပါး ... မှာဖြစ်သနည်း သငျသညျအစိမ်းရောင်-skin ရန်သူများ၏မလွှဲမရှောင်ကျူးကျော်ရင်ဆိုင်ဖို့ဖောက်လုပ်ဖို့မဟာမိတ်အဘယျသို့သောရှိလိမ့်မည်နည်း
အဆိုပါ Elven မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး Arcaena, အ Elven လေးသမား၏ခေါင်းဆောင်မိတ်ဆက်။ သငျသညျ Sylvius ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်နေချိန်မှာ - သဘာဝတရား၏တပ်ဖွဲ့များကယဉ်နိုင်သူတစ်ဦးသည်ပညာရှိသော druid, သင်ကအစွမ်းထက်မှင်စာမာဂုပညာရှိနှင့်သူ၏မဟာမိတ်များရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
ယင်း Orcs များနှင့်မှင်စာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး၌သင်တို့ကိုပင်အားကြီးသောနဂါးနှင့်သူ၏ရန်သူများကိုလှည့်စားခြင်းနှင့်သေစေတတ်သောသပိတ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူသည်သူ၏ sneaky မှင်စာမိတျဆှေ Vulpis ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ အစွမ်းထက် Orc စစ်သည်တော် - အသစ်တစ်ခုကိုအိမ်မှာတွေ့ရှိရန်သင်၏လူများအတင်းအဓမ္မကြောင့်သဘာဝရေကြီးမှု၏အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်, သင်ကတတိယဖွင့ ်. သူရဲကောင်းတွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအခနျးတှငျသငျသညျသငျတို့ရှေ့ကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းသစ်ကိုရနျသူမြားကိုရငျဆိုငျဖို့ရှိသည်ရှိရာ Dwarven နိုငျငံတျောသညျ, ရန်သင့်အားကြာပါသည်။ အသစ်သုံးမျိုးကိုဖွင့ ်. သူရဲကောင်းများနှင့်၎င်းတို့၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်နှင့်အတူ, သငျသညျကမ်ဘာအနှံ့ပြန့်ပွားမှဒုစရိုက်တပ်ဖွဲ့များရပ်တန့်ဖို့မော်ကွန်းတိုက်ပွဲ၏အလယ်သို့ခုန်ပါလိမ့်မယ်။
နည်းဗျူဟာအားသာချက်ရရှိရန်သင့်အားလမ်းအထူးပြုမာဂုပညာရှိယူနစ်စေလွှတ် ကျော်လွန်. သွားရသော, မှော်နှုနျးရမညျဖွစျသညျ။ သင့်ရဲ့သူရဲကောင်းများတွင်မျက်စိတမှိတ်အတွက်စစ်တိုက်ရာဒီရေကိုဖွင့်နိုင်သည့်ကျမ်းလိပ်များ, သုံးစွဲဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။ သည်မှာတော့ဖုတ်ကောင်သို့မဟုတ်အစွမ်းထက် golems ခေါ်သောမီးမိုဃ်းကိုရွာစေခြင်းသို့မဟုတ်အဆိပ်သည်မိုဃ်းတိမ်သို့သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဦးဆောင်လမ်းပြ, မိမိတို့အမျက်ဒေါသနှိုး။
အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာရဲတိုက်ရှိသည်။ သငျသညျသင်နှစ်သက်တဲ့တိုက်ပွဲများစတိုင်အတိုင်းချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့သူရဲကောင်းများနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးယူနစ် upgrade နှင့်စစ်မြေပြင်တခုတခုအပေါ်မှာအစွန်းရဖို့ရန်တယ်လီပို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
Single-player ကို mode ကိုအပြင်, သငျသညျဂန္တိုက်ပွဲ features ဒါမှမဟုတ်အလံနှင့်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Royale Mode ကို Capture သောစိန်ခေါ်မှု PvP multiplayer အတွက်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
●ရိုးရှင်းပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အလှည့်-based မဟာဗျူဟာဂိမ်းနှင့်နည်းဗျူဟာအတိမ်အနက်, သင်သည်သင်၏တစ်ဦးချင်းဦးစားပေးဖို့ဂိမ်းစတိုင်ညှိနိုင်သည့်ကျေးဇူးတင်။
ထူးခြားတဲ့သူရဲကောင်းများ, ယူနစ်နှင့်ရန်သူနှင့်အတူ●အပြီးအစီးလေး captivating Single-player ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။
●, သင့်ရဲတိုက် Expand သင့်ရဲ့စစ်တပ် upgrade နှင့်အထူးပြုယူနစ်စုဆောင်း။
သုံး Modes သာနှင့်အတူ● PvP multiplayer - တိုက်ပွဲသည်အလံနှင့် Royale Capture ။
တစ်ဦးချင်းစီကမ်ပိန်း၏သူရဲကောင်းများ featuring ●တစ်ဦးက Single-player ကိုတိုက်ပွဲမှာ mode ကို။
Hex Commander: Fantasy Heroes အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Hex Commander: Fantasy Heroes အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Hex Commander: Fantasy Heroes အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Hex Commander: Fantasy Heroes အား အခ်က္ျပပါ
jogoseaplicativosdiversos စတိုး 146 263.83k
Hex Commander: Fantasy Heroes ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Hex Commander: Fantasy Heroes အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.4.1
ထုတ်လုပ်သူ Home Net Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.homenetgames.com/privacypolicy.htm
လက်မှတ် SHA1: F8:9A:76:3E:0F:BD:F7:98:08:BD:2D:F8:A5:E2:F0:2B:BC:53:81:45
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Miroslaw Dymek
အဖွဲ့အစည်း (O): Home Net Games
နယ်မြေ (L): Lusina
နိုင်ငံ (C): PL
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Malopolska
Hex Commander: Fantasy Heroes APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ